Range Runners (2019) | MM Movie Store
မယျလနီ လို့ ချေါတဲ့ အမြိုးသမီးအပွေးသမားတဈယောကျရှိပါတယျ။တဈနတေ့ော့ သူက ခွလေငျြလမျးလြှောကျဖို့ ခရီးရှညျရှိတာကွောငျ့ တဈဉီးတညျးထှကျလာခဲ့ရာကနေ အမြိုးသားနှဈယောကျရဲံ နိုငျလိုမငျးထကျ ပွုမူခွငျးကို ခံရပါတယျ။ဒီအမြိုးသားနှဈယောကျ ဘယျကလဲ ဘာလဲ မသိရပါဘူး။
ဒီအမြိုးသားနှဈယောကျရဲ့နောကျကွောငျးက ဘာလဲ? မယျလနီရော ဒီအမြိုးသားနှဈယောကျရဲ့ လကျကနလှေတျပါ့မလား? ဇာတျသိမျးခါနီးမှာလညျး မထငျမှတျတဲ့ လှညျ့ကှကျတှနေဲ့ ကွုံရဦးမှာမို့ဇာတျလမျးကို မဖျောတော့ပါဘူး။ အသညျးတယားယား ရငျတဖိုဖိုနဲ့ ဇာတျသိမျးတဲ့အထိကွညျ့မိမယျ့ Thriller ကား ကောငျးကောငျးလေးတဈကားပါပဲ။
မယ်လနီ လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးအပြေးသမားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်နေ့တော့ သူက ခြေလျင်လမ်းလျှောက်ဖို့ ခရီးရှည်ရှိတာကြောင့် တစ်ဉီးတည်းထွက်လာခဲ့ရာကနေ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲံ နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမူခြင်းကို ခံရပါတယ်။ဒီအမျိုးသားနှစ်ယောက် ဘယ်ကလဲ ဘာလဲ မသိရပါဘူး။
ဒီအမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်းက ဘာလဲ? မယ်လနီရော ဒီအမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ကနေလွတ်ပါ့မလား? ဇာတ်သိမ်းခါနီးမှာလည်း မထင်မှတ်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ကြုံရဦးမှာမို့ဇာတ်လမ်းကို မဖော်တော့ပါဘူး။ အသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဇာတ်သိမ်းတဲ့အထိကြည့်မိမယ့် Thriller ကား ကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားပါပဲ။
Ghost Ship 2019 Documentary